अनिशालाई भेट्न मन छ हो बाबु भनेर सोध्दा ‘भेट्दिन’ भनेका थिए कन्चनले; (हेर्नुस् भिडियो) – Namaste Host
अनिशालाई भेट्न मन छ हो बाबु भनेर सोध्दा ‘भेट्दिन’ भनेका थिए कन्चनले; (हेर्नुस् भिडियो)
March 7, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on अनिशालाई भेट्न मन छ हो बाबु भनेर सोध्दा ‘भेट्दिन’ भनेका थिए कन्चनले; (हेर्नुस् भिडियो)
अहिले पछिल्लो समय एउटा घ’ट’नाले देश तथा विदेशका दर्शकहरुलाई रु.वा.ए.को छ। चितवन घर भएका कन्चन तिमल्सिना र अनिशा कुमाल बिचको माया प्रेमलाई लिएर अहिले सामाजिक संजाल एक तरिकाले राँ’किएको छ । कारण उनीहरुले काठमाडौँमा गएर विवाह गरेपछि अनिशा आफ्नै घर फर्किएपछी कन्चनले वि,ष पिएर आ’,त्मह’,त्या गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
विवाह गरेर पुन: घर फर्किएकी अनिशा यस विषयमा स्पष्ट पार्न मिडियामा समेत आएकी थिइन । अनिशाका अनुसार उनीहरुको चिनजान फेसबुक मार्फत भएको थियो । त्यसपछि विस्तारै उनीहरुको फेसबुक मै मायाको कुरा भएको स्वि,कारिन अनिशाले । तर फेरि अनिशाले आफुले दिएको बयान फेर्दै अनिशाले विवाह नै गर्ने भनेर स्वीकार न,गरेको बताएकी थिइन । कन्चनले काठमाडौँ लगेर आफुलाइ ज,व,र्ज,स्ती सिन्दुर लगाईदिएको समेत उनले बताएकि थिइन । र यता कन्चनका परिवारको भने अर्कै दावी रहेको थियो। कन्चनका आमाका अनुसार अनिशाले धो,का दिएपछि आफ्नो छोराले आ’,त्मह’,त्या गर्ने कोशिस गरेको हो । अहिले कन्चनको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
आज उक्त घ,ट,नाको ४९ दिन बितिसक्यो तर पनि कन्चन को अवस्था अझै ना,जु,क छ । अन्ततः कन्चन नि,भ्नै लागेको अवस्था छ । तीन पटक सम्म त उनी भेन्डिलेटरमै बसिसकेका छन ।अन्तिम भेन्डिलेटरमा राखेको ८ दिन बितिसक्दा पनि उनको अवस्था अझै त्यस्तै रहेको छ ।
घरि-घरी आँखा हेर्छन कन्चन अनि तुरुक्क आँ,सु झारिरहन्छन । आखिर के कारणले उनको एक मुट्ठी मात्र सा,स बसिरहेको छ त ? आखिर कन्चनको घिड-घिडो के मा रोकिएको छ ? अत: कन्चनका ती आँखाहरुले अनिशालाई नै पर्खिरहेको धेरैले आँकलन गरेका थिए । तर कन्चनको ममिका अनुसार उनले अनिशालाई भेट्न नचाहेको भताएकि छिन ।
अनिशाकि ममिले भनिन् ; “एकपटक होसमा आउँदा हामिले बाबुलाई सोधेका थियौ । अनिशालाई भेट्न मन लागेको छ हो भनेर सोध्दा उनले भेट्दिन भनेको थियो ।” अनि अर्को वाक्य उसले मेरो लाईफ ड्या, मेज भयो सम्म भनेको थियो । बस्, उसले बोलेको बोली यहि मात्र थियो । अब हेर्नुस् पूरा भिडियो
नेपाली चेली सृजना राना मगर अमेरिकन आर्मिको उच्च पदमा छनोट हुन सफल !
March 31, 2021 Bijay Lama
March 3, 2021 March 3, 2021 Bijay Lama
डा. भन्छन् शिशुलाई स्त नपा न ग र्न सिकाएको हो, पिडित भन्छिन् क रणीको प्रयास गरेकै हो’
March 30, 2021 Bijay Lama